MY REMEMBRANCE: ရောက်တက်ရာရာ အတွေး သတင်းများ
Posted by puluque at Sunday, June 14, 2009
၁။ တံဆိပ်ကပ်တော်ပါပေတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံက တကယ့်ဒုံးပျံကြီးအလား ထင်မှတ်ရတယ်။ ဒါနဲ့ အာကာသယာဉ်လွှတ်တာက စက်ခလုပ်နှိပ်ပြီး လွှတ်ရတာမျိုးလား။ မမြင်ဖူးတော့ မသိဘူးခင်ဗျ။
၂။ နည်းနည်းဆင်ဆင်လေးတော့ ဖတ်ဖူးသလိုပဲ။
၃။ အခုကတ်တွေကတော့ ၅၀ ဖိုးဆို အဝင်တစ်မိနစ်ပဲ ရမယ်ကွဲ့။
၄။ အလုံမှာ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနမရှိတော့ဘူးကွဲ့။ မလုံလို့တဲ့ ဘုရားကြီးကို ရွှေ့ထားတယ်။ ပြန်ပြင်လိုက်ဦး။း)
၅။ ရွှေတစ်ကျပ်သား = မြန်မာငွေ ၁၂၉ ကျပ်ဆိုတဲ့ ဈေးက တို့အဖေရဲ့ အဖွားတွေ ရွှေဆိုင်ရောင်းစဉ်က ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ဈေးနှုန်းပဲ (သြော် ကြုံလို့ပြောရဦးမယ်။ တို့အဖေရဲ့ အဖွားတွေ တောင်ငူမှာ ရွှေဆိုင်ထွက်စဉ်က တစ်မြို့လုံးမှာ ရွှေဆိုင် ၃ ဆိုင်ပဲ ရှိသတဲ့။ ဝယ်ချင်တဲ့သူက တန်းစီစောင့်ရသတဲ့။ မယုံရင် ပုံပြင်မှတ်ပေါ့ကွယ်။ )
P.S ချစ်ချစ်ဆိုတာကလဲ ဘာရေးရေးပါနေတာပဲနော်။ အဲဒါ ဘာတွေလဲဟင်။ ငါးကြော်တွေလား။
မှားပါတယ်.. အဲလိုသာငွေဈေးပေါက်ရင်တော့ အစ်မရ
ထားတဲ့ အလှူငွေတွေ ယန်း ၅၀၀၀ ဆိုရင် ငွေ ၅ကျပ်ပဲ
ဟတ်ဟတ်... ပေါက်တတ်ကရတွေ သိတ်မလုပ်နဲ့ ကောင်လေးရေ... အစ်မဦနှောက်ခြောက်သွားတယ်...
မဟုတ်သေးပါဘူး.. ဒီကလေးတွေ မိန်းမမြန်မြန်ရမှ အေးမှာပါပဲ.း)
မကြီးဝါကတော့ လုပ်ပြီ ဟိုက ဘယ်က ချစ်ချစ် လုပ်မှန်းမသိလို့ စိတ်ညစ်နေပါတယ်ဆိုမှ အဟီးးး
ဖတ်သွားတယ် အကိုရေ တကယ်ဆိုရင်တော့ ပျော်စရာပေါ့နော့် ဒါပေမဲ့ မကြာမီလာမည် မျှော် နောင် အနှစ် ဘယ်လောက်လဲတော့ မသိသေးဘူးဗျာ... စောင့်နေပါတယ် စိတ်ညစ်ရင် မိန်းမ မြန်မြန်ယူလိုက် အဲ မရှိဘူးဟုတ်လား ဒါများ ကျနော့်ကိုဆက်သွယ်
ဟဟဟ . အတွေးကောင်း အရေးကောင်း .. ကိုပုလုကွေးဆိုတာ သူကိုး :D
ဒါနဲ့ စင်ကာပူသားတွေက ဆိုက်ကားလာမောင်းမယ်ဆိုတော့ တို့တွေဆီမှာ အဲဒီချိန်ထိ ဆိုက်ကားရှိနေဦးမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ ဒါတော့ မမိုက်ဘူး။ taxi လောက်တော့ ပေးမောင်းလိုက်ပါ။ သနားပါတယ်။ ကိုယ်နဲနဲ ဖြည့်ရေးကြည့်မယ်။
၁) အာကာသယာဉ်နှင့် အာကာသတွင်း အပျော်ခရီးလိုက်ပါမယ့် သူကတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Software & Hardware အရောင်းကိုယ်စားလှယ် M81 Multimedia ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌကြီး Mr. Puluque ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အာကာသတွင်း သီတင်းနှစ်ပတ်ကျော်ကြာမြင့်တဲ့တိုင်အောင် (တကိုယ်တော်) ပျော်ပွဲစားထွက်ရင်း နေထိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (အပြန်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကြည့်ကျက် ပြန်လာခဲ့တော့။)
၂) က ပြောပြီးသွားပြီ။
၃) အလကားပေးတာတောင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ယူမယ့်သူ မရှိလို့ ပြည်ပမှ လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများကိုသာ ဝေပေးလိုက်ရကြောင်း။
၄) အဲဒါတော့ ဆက်မရေးတော့ဘူး။ ဓါတ်လိုက်မှာကြောက်လို့။
၅) မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် စင်ကာပူဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုန်း
မြန်မာငွေ ၁ ကျပ် = စင်ကာပူ ၉၅၅.၃၄၅ ဒေါ်လာ
မသေခင်လေး စာထဲကဟာ တစ်ခုခု မြင်ရရင် သေပျော်ပါပြီ။
ကျွန်တော်သာ ဆိုရင်တော့ အာကာသယာဉ် နာမည်ကို ပုရစ် လို့ ပေးလိုက်မယ်။ :D
Rita နဲ့ နေခြည်ရယ် မလုပ်ပါနဲ.
ကျွန်တော်တို. ဘယ်လိုပြန်ကြမတုံး ...
ရတဲ့လစာလေးမြန်မာငွေ ချိန်းလိုက်ရင် ဘယ်လောက်ရ မလဲ.... (၅) မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် စင်ကာပူဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုန်း
ကောင်းတယ်ဗျ .. ဒီအိမ်ရောက်မှ ခေါင်းကြည်သွားတယ်
ဖြစ်လာရင်တော့ ရှယ်ပေါ့ဗျာ..။ ဒါပေမဲ့ ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ.. အင်း...........
နဲနဲလေးပဲလွဲတာ ရှေ့နဲ့နောက် :P
အင်း နာတော့မှီတော့ဝူး :P